Izindaba - Umhlangano wokuqalisa isifinyezo maphakathi no-2019, isibonisi sokuziphatha kwethimba kanye ne-barbecue DIY
Izithuthi Zensimbi Yezimoto
Umhlangano wokuqalisa isifinyezo maphakathi no-2019, isibonisi sokuziphatha kwethimba kanye ne-barbecue DIY
NgoJulayi 6, 2019, amabhanela egcekeni leYantai Xinyang Electronics Co, Ltd. ayephakeme, umculo womkhosi uzungezwe, iziqubulo zilandelana, kanye namabhanela athi, “2019 Xinyang Electronics Mid-Year End Kick-off Meeting”, amaribhoni namabhaluni zaziphezulu egumbini lezingqungquthela zesakhiwo samahhovisi. Le ngubo beyijabulisa kakhulu, kanti abantu baseXinyang baqala uchungechunge lwemisebenzi efingqiwe yonyaka maphakathi nonyaka. Ngo-13: 30, umhlangano wabaphathi uqale ngokusemthethweni ngaphansi kokuqondiswa kwe- "Song of Xinyang". Inhloko ngayinye yomnyango nomphathi we-workshop ngokulandelana bafingqa umsebenzi engxenyeni yokuqala yonyaka futhi bahlaziya nezinkinga zomnyango uqobo. Ukugxila emsebenzini kwengxenye yesibili ka-2019 kuhlelwe. Imenenja Jikelele uJiang Shiliang ulalele Ngemuva kokuthi wonke umbiko wabasebenzi usuphothuliwe, umnyango ngamunye wanikezwa umbono obucayi, futhi amalungiselelo omsebenzi engxenyeni yesibili yonyaka asatshalaliswa ngokuya ngesimo samanje semakethe. I-workshop ethandekayo, isigaba semishini, indawo yokuhlangana, umnyango wezokukhiqiza, nomnyango wokulawulwa kwekhwalithi nawo anconyiwe. Ukuqaliswa kokusebenza kohlelo lweyunithi kwaqinisekiswa ngokuphelele, futhi siyababonga ngokuzinikela kwabo ekufezeni izinhloso zikaXinyang. Emsebenzini wethu wansuku zonke, kunendawo enkulu yokwenza ngcono kwinqubo yethu yokuphatha kanye nemiphumela yomsebenzi. Kumele sisebenzise izinzuzo zethu namandla eqembu lethu ukuze siqale i-Xinyang ukuze sifeze iphupho le-Xinyang leminyaka. Abantu baseXinyang kufanele bashiye izimo zabo zokunethezeka zokusebenza, bahlanganise ngenkuthalo izinguquko ezimakethe, bathuthukise isitayela somsebenzi esiyimpisi, futhi bathuthukise ngenkuthalo imikhiqizo emisha ngesisekelo sokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yoqobo, futhi ngesibindi baphume bayobamba imakethe evelele yabelana. Ngemuva kwenkulumo ejwayelekile, bonke abaphathi ngokuhlanganyela bafunga ukuthi kumele sisebenzise izenzo ukuthonya labo abasizungezile, sihole ngesibonelo, siziphonsele inselelo, siqhubeke nokufunda, sithonye abanye, singakhulumi amanga, siqhele kude kokulungile nokungalungile, singalokothi sizithele ngabandayo okokuqala, futhi ube nabantu abafanelekayo baseXinyang. Phishekela ikhwalithi, qhubeka uthuthuke, ugcine ukusungula, uvule imakethe, futhi uhlale uhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Njengabantu baseXinyang, kufanele siqonde imibono yebhizinisi kaMnu Jiang futhi silandele ijubane lentuthuko kaXinyang. UXinyang akasinikeli kuphela ipulatifomu yokwenza imali, kepha futhi usifundisa nencazelo yangempela yempilo. Siyajabula ngeplatifomu yeXinyang futhi siyabonga ngokusebenza kwakho kanzima.
Ngo-16: 30, iqembu elisenkampanini yegatsha lihlanzekile futhi lihlelekile. Ilanga elishisayo ehlobo bekufanele libhake umhlaba, kepha umoya, umoya nomoya wabantu baseXinyang kushintshaniswe ngefu elincane eliluhlaza ukumboza ilanga, futhi umoya onamandla wengeza kancane ekubonisweni kwethimba lesimo. Ngomoya onethezekile, namuhla ukubonisa kwethu isimilo kukhombisa isimo esihle kakhulu sokubambisana somndeni weqembu leXinyang, isikole, namasosha. Ithimba lethu kufanele ligxile ekubekeni isisekelo esiqinile seXinyang oneminyaka eyikhulu. Ngiyethemba ukuthi sizogcina ubunye kanye nesitayela esisebenzayo esizikhombisile namhlanje emsebenzini wethu wansuku zonke. Isivinini esifanayo sikhombisa ubunye bolwazi nokwenza kwabantu baseXinyang. Ekugcineni, imiphumela ikhonjiswa kuwo wonke umuntu okulesi sikhangiso esihle. We Xinyang Umkhiqizo wokugcina womugqa wokukhiqiza umugqa wokusebenzela, indawo yokusebenzela, inaliti yokusebenzela kanye nomnyango wekhwalithi yomhloli wekhwalithi uzuze abaphezulu abathathu. Izakhi namashabhu wokugweba azuze imiphumela emihle ekukhiqizeni nsuku zonke. Ukwenziwa kwezinaliti nakho kusebenza kanzima njengenkanyezi ekhulayo Ukuthola isivuno esiphindwe kabili sekhwalithi nokuthengisa, uMnyango Wezekhwalithi ulawula ngokuqinile ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yeXinyang iqhubeka ithuthuka. Umzuzu owodwa esiteji neminyaka eyishumi yokusebenza. Ngemuva komsebenzi obucayi, benza umsebenzi omuhle ekwakheni iqembu, ngakho-ke bathole imiphumela emihle kakhulu. Kufanele sifunde eqenjini elihle kakhulu, futhi ngasikhathi sinye, sishiye imikhuba emibi emsebenzini wansuku zonke futhi sinikeze ukudlala okugcwele kuzinzuzo zethu. Izinhloso zebhizinisi.
Umvuthwandaba womsebenzi uqale nge-barbecue enempilo nejabulisayo. Umlilo wamalahle ovuthayo ufana nenhloso yethu yasekuqaleni ukulwela amaphupho ethu nokusebenza kwebhizinisi elikhulayo likaXinyang. Busisa uXinyang. Amalungu omndeni kaXinyang ahlanganiswe ngokucabanga nangesinyathelo ngesinyathelo. Emsebenzini ozayo, kufanele sisebenzise izinzuzo zethu ukusebenza kanzima ephusheni likaXinyang leminyaka futhi siqinisekise ukuqedwa kwezinhloso zebhizinisi ze-2019.
Isikhathi Iposi: Jul-07-2019